Andiany faha-10 ny “Lalaon’ny Nosy”: hanainga, anio, ny minisitra Tinoka Roberto | NewsMada
Andiany faha-10 ny “Lalaon’ny Nosy”: hanainga, anio, ny minisitra Tinoka Roberto
Taorian’ny andiany roa izay efa lasa, anio no hanainga ny delegasiona malagasy fahatelo, hihazo ny Nosy Maorisy, amin’ilay “Lalaon’ny Nosy” hanomboka ny 19 jolay ho avy izao ary hifarana ny 29 jolay.
Fiaingana fahatelo ho an’ny delegasiona malagasy, hiatrika ny “Lalaon’ny Nosy” any Maorisy, anio. Delegasiona mafonja ny hanainga amin’ity andiany fahatelo ity, tarihin’andriamatoa minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, i Tinoka Roberto. Marihina fa isan’ireo hanainga, anio, ihany koa ny taranja baolina kitra, ny basikety, ny handisport ampahany voalohany, ny atletisma ampahany voalohany, ny tenisy ambony latabatra, ny judo, ny badminton, ny ampahany voalohany amin’ny taranja fibatana fonjamby, ireo filohana federasiona sasantsasany ary ireo mpanao gazety fanatanjahantena hanaraka akaiky ity “Lalaon’ny Nosy” any Maorisy ity. Tsiahivina fa hisokatra amin’ny fomba ofisialy, any Maorisy rahampitso 19 jolay, ity andiany faha-10 amin’ny “Lalaon’ny Nosy” ity.
Efa milamina avokoa ny atleta rehetra
Efa milamina avokoa ary efa samy nahazo ny fanamiana sy ny fitaovana rehetra ilaina, hahafahana miatrika ity lalao ity, ireo atleta tsirairay sy ny ekipa nasionaly handray anjara. Efa natomboka izany fizarana fitaovana izany, ny fiatombohan’ity herinandro ity. Fanamiana miisa telo, misy “survêtements” roa sy fanamiana malagasy iray ny azon’ny atleta tsirairay tamin’izany, ankoatra ny fitaovana isan-karazany sy ny kiraro ary ny godasy. Nahatsiaro ho manana raiamandreny tokoa ireo atleta nahazo izany fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana izany ka tsy nanadino ny nisaotra ny eo anivon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Etsy ankilany, mandray an-tanana ireto solontena malagasy hiaro ny voninahi-pirenena any Maorisy ireto ihany koa ireo minisitra mpiahy.
Tsiahivina fa efa any an-toerana avokoa ireo lehiben’ny iraka sy ny filohan’ny delegasiona lahy sy vavy, manomana ny fanokafana ho amin’ny rahampitso. Azo lazaina ho efa milamina amin’ny ankapobeny, araka izany, ity “Lalaon’ny Nosy” andiany faha-10 ity, ho an’ny delegasiona malagasy.